UPDATE: Madaxii qaraxyada Al-Shabaab u qaabilsanaa oo Kenya lagu qabtay | HalQaran.com
UPDATE: Madaxii qaraxyada Al-Shabaab u qaabilsanaa oo Kenya lagu qabtay
Nairobi (Halqaran.com) – Ciidamadda ammaanka ee dalka Kenya ayaa sheegay in jimcihii shalay ay gacanta kusoo dhigeen sarkaal sare oo Al-Shabaab u qaabilsanaa weerarada ka dhaca gudaha dalka kenya gaar ahaan Xaduuda.
Sarkaal ka dambeeyay weerarkii dhawaan lagu dilay 11 askari oo kamid ah Ciidamadda kenya, kuwaasi oo qarax lagula beegsaday Xuduudda Soomaaliya iyo kenya.
Booliska kenya waxa ay sheegeen inay gacanta kusoo dhigeen sarkaal soo abaabulay weerarkii qaraxa lagula eegtay kolonyo ay la socdeen Ciidamada kenya, kuwaasi oo marayay xuduuda ay u dhaxeyso dalalka Soomaaliya iyo Kenya sarkaal ay gacanta kusoo dhigeen booliska kenya, waxa ay ku sheegeen magaciisa Cabdullaahi Banaati.
“Baaritaanno aynu sameynay waxa ay muujinayaan in weerarkii u dambeeyay ee lagu bartilmaameedsaday askarta kenya ay ka dambeeyeen koox kamid ah Al-Shabaab oo uu hogaaminayay Cabdullaahi Banaati oo ahaa maskaxdii kadambeesay weerarkaasi iyo weeraro kale oo lagu bartilmaameedsaday xurumo dowladeed iyo sidoo kale saraakiil kamid ah ciidamada amaanka dowlada kenya” sidaa ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay booliska dalka kenya.
Booliska Kenya waxa ay sheegeen in haatan ay wadaan baaritaanno dheeraad ah oo ku aadan sarkaalka katirsan alshabaab sida ay ugu suurto gashay inuu abaabulo howlagallo lagu bartilmaameedsanayo ciidamada amaanka dowlada kenya ay kusocdaala xadka kalaqeybiya wadamada somalia iyo kenya, Booliska kenya waxa ay sheegeen in haatan ay kuguda jiraan baaritaanno lagu baadi goobayo xubnihii la socday Abdullahi banaati oo ay sheegeen iney ku dhuumaaleysanayaan xuduuda Soomaaliya iyo Kenya.
Dhawaan ayay aheyd markii qarax Al-Shabaab dhulka lagu aasay ay la bartilmaameedsadeen kolonyo ay wateen ciidamadda ammaanka dowlada Kenya, islamarkaana ay halkaasi ku geeriyooday 11 askari oo kamid ah ciidamada booliska dalka Kenya.
ciidamada Ammaanka ee Kenya
Madaxii Al Shabaab u qaabilsanaa qaraxyada